Uncedo lweziTyalo zeArtificial | JIAWEI
Iintlobo zezityalo ezitshisiweyo zininzi kwaye izitayile zigqibelele. Ngokusekwe kumqondo "oluhlaza, okusingqongileyo, obuhle kwaye obuhle", sizabalazela ukudala imarike ekhethekileyo yezityalo ezenziwe, ukulungiselela ukuqhuba kobomi babantu, ukutshintsha indibaniselwano entle yendalo yasekhaya, kunye nokwakha ngokutsha Ubomi babantu bugcwalise umhlaba ngolonwabo oluhle kwaye lwenza imeko yokuhlobisa ekhaya, ilula kwaye intle.
Ngoku makhe siqwalasele iingenelo zezityalo ezenziweyo
Eyokuqala: Okokuqala, indawo yokuqala yokuqala abantu ukuba bakhethe isityalo esenziwe sisebenzisa umhlobiso. Kuba isetyenziselwa ukuhlobisa indalo kuba iyinyani kwaye icacile, isiphumo sokuhombisa sihle ngokwanele.Izityalo ezomeleleyo ezingakhawulelwanga yimeko yendalo njengokukhanya kwelanga, umoya, amanzi kunye namaxesha onyaka.kodwa kwintlango esemantla-ntshona okanye iGobi eyinkangala nayo inokwenza indawo Umhlaba oluhlaza njengohlobo lwentwasahlobo unyaka wonke.Mazwe ahlukeneyo, iindawo ezahlukileyo zinokusetyenziswa njengeendawo zokuhlobisa, ezinje ngegadi, iindawo ezintle, iindawo zentengiso, izakhiwo zokuhlala, iiplaza, iivenkile ezinkulu zokuthenga, iindlela kunye nemilambo, njl njl., zinokuhonjiswa Ngumthi otyunjiweyo.
Okwesibini: Izityalo ezenziwayo azidingi kukhathalelo lwemihla ngemihla. Musa ukumanzi okanye ukuchumisa. Sifuna nje ukusula ngetawuli emanzi xa kukho uthuli kumagqabi kuba kuya kubakho uthuli lokubeka ixesha elide. Akukho sidingo sokukhathazeka ukuba izityalo ziya kubuna kwaye zibune. Ikwagcina iindleko zemihla ngemihla zokulawula kunye namandla.
Okwesithathu: Kunye nokuphuhliswa kwezinto zokwakha, izimvo zoyilo kunye noyilo sele zikhululiwe, ngakumbi nangaphezulu indawo ephakathi ebonakalayo yobomi bethu.isityalo sokwenza izinto esizisa intende ngenesimo esihle segalufa lomhlaba ngaphakathi kwigumbi, ukulungiselela nje ukudibana. imfuno yolu hlobo lwendawo kunye nokudala isiphumo somhlaba esibonwe ukuba izityalo eziqhelekileyo azinakufezekiswa.